Ogaden News Agency (ONA) – Qurba joogta Soomaaliyeed Oo loogu Baaqay In Shirka Diyaaradaha Ethiopian Airline Marnaba…
Qurba joogta Soomaaliyeed Oo loogu Baaqay In Shirka Diyaaradaha Ethiopian Airline Marnaba…
Posted by ONA Admin	/ June 20, 2016
Dhawrkii maalmood ee lasoo dhaafay baraha bulshadu ay ku xidhiidho waxaa si wayn loogu baahiyey isla markaana shacabka soomaaliyeed guud ahaan loogu baaqay inaysan fasaxa xilliga xagaaga marnaba tigidho ka iibsan shirkada diyaaradaha Ethiopian Airline iyadoo arintani looga gol leeyahay in dhanka dhaqaalaha lagaga aargoosto xukuumada wayaanaha xasuuqa ay ciidamadeedu ku hayaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaa kuwa Ogaadeniya.
Quba joogta ugu tirada badan ee Europe iyo Waqooyiga America waa in lagacagtooda marnaba aysan ku iibsan tigidho lagu gumaado shacabkooda laguna masruufo ciidamada gumaysiga Ethiopia.
Shacabka soomaaliyeed waxay dhaqaale iyo maal badan ku bixi yaan hormarka Ethiopia balse Ethiopia waxay dooneysaa inaan mar kale aduunka lugu arrkin jiritaanka magaca iyo dal soomaaliyeed.
Ethiopia makala jecla soomaaliga ku nool koonfurta soomaliya iyo waliba soomaaliga ku nool bariga somaliya,Soomaaliga ku nool Ogaadeeniya soomaaliga ku nool waqooyi bari kenya iyo kan ku nool Djabouti.
Hadii shacabka dalka soomaaliya gaar ahaan kuwooda ku nool dalalka dibada ay joojiyaan maal galinta iyo macaamiisha ay uyihin Ethiopia Airline waxaa hubaal ah in Ethiopia baahi iyo macluul soo food saari xili dhow.
Shacabka soomaliyed waa inney ka fikiraan sidii garab iyo farsamo loogu caawin lahaa shacabka – Oromiya ee kacdoonka gumaysiga ka fajiciyey wada mudada ka badan sideeda bilood. Sidoo kael waxaa looga bahaan yahay shacabka Soomaaliyeed inay gabar istaagaan walaalahooda Ogaadeeniya ee dagaalka qarniyada in kabadan kula jira gumaysiga Ethiopia
Arintani yeeysan noqonin laab lakac iyo waan cadhooday balse waa ineynu ka wada fikirnaa saameynta Ethiopia mustaqbalka fog iyo mustaqbalka dhow..